I-KDE iyaqhubeka nokuphucula iPlasma 5.23 ngaphambi kokukhutshwa kwayo | Ubunlog
I-KDE iyaqhubeka nokuphucula iPlasma 5.23 ngaphambi ko-Okthobha u-12
IPablinux | 02/10/2021 10:31 | Ukuhlaziywa ukuba 07/10/2021 15:32 | KDE, Ubuntu
Khange ndivavanye ngokobuqu, ke andazi ukuba iPlasma 5.23, engu "25th Anniversary Edition," iya kuba lukhululo olukhulu ngokwenene okanye izakufumana nje igama kuba imihla iyahambelana. Into eyinyani neqinisekisiweyo yile Iprojekthi ye KDE iya kukhupha iPlasma 5.23 phakathi kule nyanga, yona sebesungule i-beta kwaye ngoku ngoku bajolise ekubekeni izinto zokugqiba.
Así uyasixelela UNate Graham kwiposti yakhe yeveki kwi-pointseststick.com, apho uninzi lwamanqaku awakhankanyayo ephela ngegama lomphuhlisi ecaleni kwenguqu elandelayo yendawo yemizobo asebenzisana nayo. Njengemisebenzi emitsha siqhubele phambili kuphela namhlanje, ukuba iKonsole izakuvumela ukuba sitshintshe umbala wesicelo ngokwawo nokuba yeyiphi na imibala yenkqubo yonke, into eza kufika kuhlelo lukaDisemba lwe KDE Gear. Apha ngezantsi unazo zonke ezinye Uluhlu lweenguqu ezizayo.
1 Ukulungiswa kwamaphutha kunye nokuphuculwa kokusebenza okusiza kwi KDE
2 Ukuphuculwa konxibelelwano lomsebenzisi
3 Iza kufika nini yonke lento
Ukulungiswa kwamaphutha kunye nokuphuculwa kokusebenza okusiza kwi KDE
Umbono okwahluliweyo ovulwe eDolphin awusavali ngokungacwangciswanga xa umsebenzi wokukhumbula ubume befestile yokugqibela evaliweyo yenziwe okanye yangasebenzi (Eugene Popov, Dolphin 21.08.2).
Ukutshintsha komsebenzisi ngokukhawuleza ngoku kuyasebenza (uVlad Zahorodnii kunye noXaver Hugl, iPlasma 5.23).
I-KWin ayisaphazanyiswa ngamanye amaxesha xa usetyenziso oluthile lubonisa iimenyu zentsingiselo kunye nezinye izinto ezivelelayo (iVlad Zahorodnii, iPlasma 5.23).
I-KWin ayisaphazanyiswa xa uphuma rhoqo rhoqo (UVlad Zahorodnii, IPlasma 5.23).
Ukucwangciswa kokubekwa esweni okubini apho bobabini babonisa iziphumo ezifanayo ngoku kufunyenwe ngokuchanekileyo kwiphepha lokubonisa kunye nokubeka iliso kwiiNkqubo ezikhethwayo (Xaver Hugl, Plasma 5.23).
I-KWin ayisaphazanyiswa xa ivuka kubasebenzisi be-NVIDIA GPU (Vlad Zahorodnii, IPlasma 5.23).
Ukungafumaneki kokusebenza kwesitshixo esizenzekelayo ngoku kusebenza ngokuthembakeleyo (iMeven Car, iPlasma 5.24).
Ukufumanisa kungasetyenziswa kwakhona ukukhipha usetyenziso emva kotshintsho olungalindelekanga kwilayibrari yePhakejiKit elusebenzisayo (UAlexander Rojas, iPlasma 5.23).
Ubeko lwebhodi yezitshixo ephawulwe "spare" kwiiNkqubo ezikhethwayo ngoku zinokutshintshwa kusetyenziswa imenyu yokuma kweapplet (Andrey Butirsky, Plasma 5.23).
Zonke izinto ezikwindlela esecaleni yokukhethwa kweNkqubo ngoku zibonakalisiwe xa zihamba ngaphezulu (uNate Graham, iPlasma 5.23).
Akusekho lula ukujonga isixhobo esifihliweyo kwizixhobo kwiphepha lokuHlaziya uHlaziyo ngelixa ulayisha / uhlaziya uluhlu lohlaziyo (Fushan Wen, IPlasma 5.23).
Kwiphepha lezicwangciso zoMsebenzi, "Chaza isimilo esikhethekileyo" ibhokisi yebhokisi engasabonisi iikopi eziphindiweyo (u-Oleg Solovyov, iPlasma 5.23).
Ukukhangela kwi-Discover ngoku kusebenza ngokuthembekileyo ngakumbi, ngakumbi xa ukhangela kwangoko emva kokumiliselwa kwesicelo. Ukujonga uhlaziyo kukhawuleza kakhulu. (UAleix Pol González, IPlasma 5.24).
Imithetho ye Window ifikelelwe kwimenyu yokuma kwefestile (kunye namanye amaphepha oKhetho lweNkqubo aboniswe ngokuzimeleyo kwiifestile zabo) ngokuchanekileyo bonisa umxholo / ulawulo lweenyawo kwakhona (Ismael Asensio, Iisakhelo 5.87).
Ukufumanisa ngoku kukhawuleza ukulayisha umxholo wokuqala walo naluphi na udidi lweAddons (Aleix Pol Gonzalez, iiNkqubo-sikhokelo 5.87).
I icon ye-KTimeTracker ngoku iboniswe ngokuchanekileyo (Manuel Jesús de la Fuente, Frameworks 5.87).
Ukuphuculwa konxibelelwano lomsebenzisi
Xa usebenzisa ukubuyisela iseshoni, iSpectacle ayisazukungena xa ungena xa ivuliwe ngexesha lokugqibela lokuphuma (uIvan Tkachenko, iSpectacle 21.12).
Ngoku sibonisa izithonjana ze.
Ezinye izithonjana ngoku zibonisiwe kwiifayile zevidiyo (UMartin Tobias Holmedahl Sandsmark, iDolphin 21.12).
U-Elisa akasabonakali ngamanye amaxesha umgca omhlophe ongezantsi kwendawo ephezulu yokubhaliweyo kunye nobukhulu beefestile ezithile (uFushan Wen, uElisa 21.12).
Amaqhosha asekhaya kunye nawokugqibela ngoku azulazulela kwizinto zokuqala nezokugqibela (ngokulandelelana) kwiziphumo ze-KRunner jonga pop-up xa icandelo lokukhangela lingajonganga (Alexander Lohnau, Plasma 5.24).
Iwindows ezijolise ekusebenziseni indlela yokubekwa kwefestile ye-KWin okanye isenzo soku'Hambisa iwindow kwiziko 'ngoku thatha ubukhulu beepaneli zePlasma xa ubala indawo ekhoyo kwiziko windows (Kristen McWilliam, Plasma 5.24).
Inkqubo yezikhethwa zebhodi yezitshixo iphepha ngoku lihlonipha umsebenzi "bonisa useto olulungisiweyo" (uCyril Rossi, iPlasma 5.24).
Kukho iinguqulelo ezingama-22x22px zeempawu ezikhethiweyo zeBreeze, ezinokuthi zenze ukuba ezo icon zibonakale ngcono naphina apho ziboniswa khona kubungakanani, njengakwindlela esecaleni yokukhethwa kwenkqubo (Manuel Jesús de la Fuente, Frameworks 5.87).
Iza kufika nini yonke lento
IPlasma 5.23 iza ngo-Okthobha 12. I-KDE Gear 21.08.2 iya kukhutshwa nge-7 ka-Okthobha, kwaye nangona ungekho umhla othile we-KDE Gear 21.12 okwangoku, kuyaziwa ukuba siya kuba nakho ukuyisebenzisa ngoDisemba. Izakhelo ze-KDE 5.87 ziya kukhutshwa ngo-Okthobha 9. IPlasma 5.24 ayinaye umhla ocwangcisiweyo.
Ukonwabela konke oku ngokukhawuleza kufuneka songeze i-KDE Backports repository okanye sisebenzise inkqubo yokusebenza enendawo yokugcina efana KDE neon okanye nakuphi na ukuhanjiswa okunemodeli yophuhliso yiRollling Release, nangona eyokugqibela ihlala ithatha ixesha elide kunenkqubo ye KDE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE iyaqhubeka nokuphucula iPlasma 5.23 ngaphambi ko-Okthobha u-12
Impazamo encinci kwisihloko. Okthobha 12, hayi ngoMatshi 12.
Ukuphuhliswa kweLumina Desktop kuqalwa kwakhona kwaye kufika kunye nohlobo lwayo lwe-1.6.1
Le yinkqubela phambili eyenziweyo yaziwa ngomsebenzi weFirefox eWayland